Lapho ucwaninga futhi ukhetha umphathi wewebhu ukubeka isizinda sakho, isici esisodwa sokuhlola nokuqhathanisa yizindleko zemali yakho edingekayo you-bandwidth,
Yebo, abahlinzeki abaningi banikela "Izinhlelo ezingenamkhawulo" zokubamba, kodwa uma uhlolisisa, uzothola lokho okungenamkhawulo akulona okungenamkhawulo – kunamacala njalo uma usebenzisa okuningi njengoba kusekelwe "kokujwayelekile" ukusetshenziswa, noma ngabe kusho ukuthini. Lokho kusho, ukwazi ukuthi ibanga elingakanani leli sayithi lakho elidinga ngempela kungaba yindlela encane yobuciko.
Ngokuyinhloko, umkhawulokudonsa yisikhathi sokubala izinga lomgwaqo kanye nedatha evunyelwe ukugeleza phakathi kwabasebenzisi nesayithi lakho nge-intanethi. Igama elithi "bandbredd" livame ukusetshenziswa kabi ekuchazeni "ukudluliswa kwedatha" kodwa empeleni lezi zizinto ezimbili ezihlukile.
Inombolo "ukudluliswa kwedatha" ikutshela ukuthi ungadlulisa idatha engakanani ngenyanga. Inombolo "ku-bandbredd" ikutshela ukuthi idatha idluliselwa kanjani ngokushesha.
Cabanga umkhawulokudonsa njengoba ububanzi bombhobho wamanzi lapho ukudluliswa kwedatha kungumthamo wamanzi ogeleza ophuma pipayipi. Ububanzi bomkhawulo wamapayipi (ukuphuma komkhawulokudonsa) kunquma ukuthi ungashesha kanjani amanzi (idatha) egeleza. Ngokuyisisekelo, ukudluliswa kwedatha kusetshenziswa ukusetshenziswa komkhawulokudonsa.
Kubanikazi bewebhusayithi abafuna ibamba lewebhu, inani lomkhawulokudonsa ukuthi isayithi lenkampani yokubamba lingakhonza njengesibonakaliso esihle samakhono alowo mphathi – ephakeme ububanzi bomgwaqo, ijubane elingcon; inethiwekhi; ukuxhumana; kanye nezinhlelo.
Njengoba kushiwo ngenhla, inhlangano eningi yokubamba inikeza izinhlelo ezishibhile zokubamba okubandakanya "umkhawulokudonsa ongenamkhawulo." Kumthengi, lokhu kusho ukuthi bangasebenzisa idatha eminingi kanye nomgwaqo omningi kusayithi labo njengoba badinga ngaphandle kokufakwa. Kumhlinzeki wokusingatha, kusho indlela yokunikeza izindleko zendleko kumthengi ngokuvamile oyosebenza.
Kulula nje, akunakwenzeka ukuba izinkampani zokubamba ukunikeza umkhawulokudonsa ongenamkhawulo – kubiza kakhulu ukunikeza ukufinyelela okungavumelekile kuwo wonke amakhasimende. Lokho kusho ukuthi iningi lezinkampani ziwela endaweni ethile "ejwayelekile" ekusetshenzisweni kwe-bandbredd ngokuzenzakalelayo, futhi lolu hlu yilokho abahlinzeki abasebenzisa khona lapho bekha amaphakheji "angenamkhawulo". Ngabanikezeli "abangenamkhawulo," abangakwazi ukubamba iningi lalabo abaklayenti babo – noma kunjalo, kukhona i-plailing ngokugcwele emkhawulweni vi-bandbredd ohlanganisiwe kuleyo ndleko yephakheji; ukukhohlisa ukwazi ukuthi kuyini.
Ngokuqhathanisa umkhawulokudonsa wangempela vi-site oyifunayo kanye nomkhawulokudonsa ohlinzekwa kuleso simo "esingenamkhawulo", ungangcono ukunquma ukuthi yiliphi izinga lokubamba iqhaza elikudingayo ngempela nokuthi ngabe umhlinzeki onikeziwe uzohlangabezana nezidingo zakho ngempela.
Cabanga nge-bandbredd njenge-par bantshi: udinga usayizi oludea. Akukwenzi konke ukuhlakanipha ukuthenga usayizi, kodwa endaweni efanayo, kunombhalo ohambisanayo. Uma isikhumba sakho sisayizi we-36, umane ngeke uhlangabezane naleyo 32. Izibalo ezilula.
Ku-bandbredd, futhi akunangqondo ukuthenga up – yingakho kunengqondo ukusebenzisana nabanikezeli bezokusingatha abanikeza izixazululo ezingabonakaliyo. Mayelana nokuthenga amancane, lokho kuzokungena enkingeni kuphela. Yazi isidingo sakho sangempela ukuthola isevisi eyokusebenzela – nansi indlela yokubala umkhawulokudonsa wakho odingekayo:
Uma ungazi, sebenzisa Isikhathi somthwalo we-Pingdom hlola kumakhasi ambalwa bese uthatha isilinganiso salawo maphepha ahlolwayo ngenombolo yakho yokuhlola isisekelo. Nazi ezinye izibonelo zokuphila zangempela:
I-bandbredd edingekayo = Ukubukwa Kwekhasi Lokuphakathi x Isilinganiso Sekhasi Lesilinganiso x Isilinganiso Sokuvakashelwa Kwansuku zonke x Inombolo yezinsuku ngenyanga (30) x I-Factor Redundant
I-redundant faktor: Isici sokuphepha sine-1.3 – 1.8.
I-Bandwidth edingekayo = [(Ukubukwa Kwekhasi Lokuphakathi x Isilinganiso Sekhasi Lesilinganiso x Isilinganiso Sokuvakashelwa Kwansuku zonke) + (Ukulinganisa Okuphakathi ngosuku x Usayizi Wefayili YesiXuoloezundo) In 30
Yebo no cha.
Noma kunjalo, izinombolo ku-bandbredd / ukudluliswa kwedatha akufanele kube yinto enkulu yokucatshangelwa lapho ukhetha umgcini we-web – ikakhulukazi uma uqala nje.
Jag-bandbredd (ukudluliswa kwedatha), nendawo yesitoreji, akuyona neze in yokuqhathanisa enengqondo yokubamba abathengi – ikakhulukazi uma umusha – ezimakethe zanamuhla.
Uma ufuna i-webbhotell, funda kabanzi mayelana izinto okufanele uzikhathalele uma ukhetha umphathi wewebhu.